Yini ongayithatha ukuze uthole ukukhululeka kwesicanucanu? Imithi yokwelapha isicanucanu namakhambi - Imfundo Yezempilo | Septhemba 2021
Izidakamizwa Vs. Umngani Ukuphila Kahle Ezokuzijabulisa Umphakathi, Inkampani Inkampani, Izindaba Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Inkampani Ukuphuma Imfundo Yezempilo, Izindaba Umphakathi Umphakathi, Ukuphila Kahle Ezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Inkampani, The Checkout Inkampani, Imfundo Yezempilo
Main >> Imfundo Yezempilo >> Yini ongayithatha ukuze uthole ukukhululeka kwesicanucanu? Imithi yokwelapha isicanucanu namakhambi
Sonke sizizwe sinesicanucanu phambilini, kungaba ukugula kwemoto, ukudla okuthile okungathandeki, noma ukuthatha umuthi esiswini esingenalutho. I-nausea-ukuzwa kwesisu esidumbile okungathi kwesinye isikhathi kuholele ekuhlanzweni-akuwona umuzwa ojabulisayo. Kepha ngokujabulisayo, kunemithi yokuhlanjululwa namakhambi asekhaya okusiza isicanucanu (noma ngabe ukhulelwe).
kukhona umuthi ojwayelekile we-eliquis
OKUSHIWO: Ungayelapha kanjani isicanucanu lapho ukhulelwe
Ungasusa kanjani isicanucanu
Isicanucanu singashukunyiswa yizimo ezahlukahlukene ezinjengokunyakaza noma ukugula kwasolwandle, imishanguzo ethile, ukucindezeleka ngokomzwelo, ubuhlungu obukhulu, ukungabekezelelani kokudla, ukuphuza kakhulu utshwala, ukudla ngokweqile, nokukhulelwa usencane, kuchaza USunitha Posina , MD, umfundi wase-NYC.
Kunezindlela ezimbili eziyinhloko zokwelapha isicanucanu: umuthi wokucanuzela kwenhliziyo namakhambi asekhaya. Imithi isebenza ngezindlela ezahlukahlukene, kuya ngokuthi uphuza muphi umuthi. Enye indlela esebenza ngayo izidakamizwa zokulwa nesicanucanu ukuvimba ama-receptors abanga ukuzwa kwesicanucanu. Enye indlela ukugcoba nokuzola isisu. Eminye imithi yesicanucanu ingahambisa nokudla esiswini ngokushesha.
Imithi yokulwa nesicanucanu isebenza ngezindlela ezahlukahlukene. Omunye wemithi edume kakhulu etafuleni yesicanucanu, uPepto Bismol, uqukethe isithako esisebenzayo esibizwa ngokuthi yi-Pepto Bismoli-bismuth subsalicylate (i-bismuth subsalicylate amakhuphoni | imininingwane ye-bismuth subsalicylate). I-Bismuth subsalicylate isebenza ngokuvikela ulwelwesi lwesisu sakho futhi inciphise i-asidi yesisu eseqile ukwehlisa noma yikuphi ukungakhululeki, kusho uDkt Posina.
I-Dramamine (amakhuphoni we-dramamine | imininingwane ye-dramamine) i-antiemetic, okusho ukuthi ivimbela ukuhlanza. Bekujwayele ukuvimbela nokwelapha isicanucanu, ukuhlanza, nesiyezi okubangelwa ukugula okunyakaza. Isebenza ngokuvimba ama-receptors emathunjini akho abangela isicanucanu ebuchosheni. Kungadala ukozela, ngakho-ke khetha ifomula elingazeli uma lokho kuyinkinga, uDkt Posina uphakamisa.
I-Emetrol, omunye umuthi odumile wasetafuleni, usebenza ngokushesha ngokuthulisa isisu. I-Emetrol (isigqebhezana se-emetrol | imininingwane ye-emetrol) inemiphumela emibi ejwayelekile embalwa uma iqhathaniswa neDramamine. Ama-antihistamine amaningi asetshenziswa njengemithi yokuhlanza njengoba inhle ekunciphiseni ukuzwa kwesicanucanu ekuguleni okunyakazayo.
Senze uhlu lwemithi kadokotela ethandwa kakhulu kanye nemithi yokuhlanza ethengwa kakhulu emakethe.
Imithi yokulwa nesicanucanu ehamba phambili
Imithi I-OTC noma i-Rx Kuphephile ngesikhathi sokukhulelwa? Ikhuphoni le-SingleCare
I-Zofran (ondansetron) I-Rx Akunabufakazi bengozi, kepha idatha iyashayisana Thola ikhuphoni
I-Promethegan (promethazine) I-Rx Ubungozi abunakunqatshelwa ngaphandle - Isigaba C Thola ikhuphoni
I-Phenergan (promethazine) I-Rx Ubungozi abunakunqatshelwa ngaphandle - Isigaba C Thola ikhuphoni
I-Reglan (metoclopramide) I-Rx Akunabufakazi bengozi Thola ikhuphoni
Ngithenga (prochlorperazine) I-Rx ne-OTC I-FDA ayikahlukanisi lesi sidakamizwa Thola ikhuphoni
I-Ativan (lorazepam) I-Rx Ubufakazi obuhle bengozi Thola ikhuphoni
I-Dramamine (i-dimenhydrinate) I-Rx ne-OTC Akunabufakazi bengozi - Isigaba B Thola ikhuphoni
I-Bonine (meclizine) I-Rx ne-OTC Akunabufakazi bengozi Thola ikhuphoni
I-Atarax (hydroxyzine) I-Rx I-FDA ayikahlukanisi lesi sidakamizwa Thola ikhuphoni
I-Emetrol (i-carbohydrate enefosidi) OTC I-FDA ayikahlukanisi lesi sidakamizwa Thola ikhuphoni
I-Scopolamine I-Rx Ubungozi abunakunqatshelwa ngaphandle - Isigaba C Thola ikhuphoni
Shayela (dimenhydrinate) I-Rx ne-OTC Akunabufakazi bengozi - Isigaba B Thola ikhuphoni
I-Pepto-Bismol (i-bismuth subsalicylate) OTC Ubungozi abunakunqatshelwa ngaphandle - Isigaba C Thola ikhuphoni
Amakhambi asekhaya okusiza isicanucanu
Kunamakhambi amaningi athandwayo wasekhaya ongazama ukusiza ukunciphisa isicanucanu. Nalu uhlu lwezinye izindlela zokwelashwa zasekhaya ezisiza kakhulu.
Ukusiza ukwehlisa isisu nokuqeda izimpawu zesicanucanu, phuza uketshezi olucacile njengamanzi, i-Jell-O, noma umhluzi futhi kancane kancane wethule ukudla okuyisicefe, njengabaqhekezi noma isinkwa esisobala, njengoba kuvunyelwe, kuphakamisa ULili Barsky , MD, isibhedlela esizinze e-LA nodokotela ophuthumayo. Gwema ukudla okunzima, okunamafutha, okumnandi noma okubabayo. Ukudla ukudla okungenangqondo nakho kuyasiza uma uhlangabezana kaningi isilungulela .
OKUSHIWO: Yini okufanele udle uma uphethwe umkhuhlane
Enye yezinzuzo zokuqala zezokwelapha ezitholakale nge-cannabis kwaba ukwelashwa isicanucanu . Ukuphathwa Kwezokudla Nezidakamizwa e-U.S. Kuvumile ama-agonists amabili ama-cannabinoid receptor ezigulini ezithola ukwelashwa ngamakhemikhali ukusiza ukuqeda isicanucanu — UMarinol ( dronabinol ) noCesamet (nabilone). Ngaphezu kwezinto zabo zokulwa nesicanucanu, ama-cannabinoids nawo angakhuthaza ukuthanda komuntu. Ungahlola futhi Uwoyela we-CBD njengesixazululo esingokwemvelo sesicanucanu.
malini ukuvakashelwa kokunakekelwa okuyisisekelo
Ujinja ungenye yamakhambi aphephe kakhulu ekhaya okuba nesicanucanu ngesikhathi sokukhulelwa. Ukuthatha i-1 gram kajinja usuku ngalunye kuyindlela ephumelelayo yokulawula isicanucanu nokuhlanza kwabesifazane abakhulelwe ngaphesheya izifundo eziningi . Izitolo eziningi zithengisa amaphilisi wejinja , kepha uswidi we-ginger nayo iyindlela. Ezinganeni ezihlushwa isicanucanu, i-ginger ale isiphuzo esidumile sokusiza ngezimpawu.
I-Aromatherapy izokhipha isicanucanu ngokushesha. Amafutha e-Peppermint i-aromatherapy iyasebenza ekulweni nesicanucanu. Ucwaningo olulodwa bathole ukuthi iziguli zangemva kokuhlinzwa ezinesicanucanu babenombono wokuthi isicanucanu sehle ngo-50% lapho besebenzisa i-peppermint oil aromatherapy. Ulamula aromatherapy ingahle ibe nemiphumela efanayo nakoyela we-peppermint, kanye ne- i-cardamom aromas , eye yaba nezinzuzo ezinhle ngeziguli ze-chemotherapy.
I-Acupressure enye indlela yokwelapha. Ngokufana nokukhishwa kwesikhumba, i-acupressure yenziwa ngokusebenzisa ingcindezi yamaphoyinti athile emzimbeni. Kukhona okutholakele ukuthi i-acupressure ingaba wusizo ekunciphiseni izingqinamba zesisu.
Ukuthatha uvithamini B6 kutholakale kuwusizo kwiziguli ze-chemotherapy kanye nabesifazane abakhulelwe ababhekene nokugula kwasekuseni. Noma kunjalo, ucwaningo ayikhombisanga ukusebenza kwayo ekuphatheni isicanucanu. Ucwaningo olulodwa luthole lokho Abantu abangama-42% ube nesicanucanu esincane ngemuva kwale ndlela.
ukuphonsa kwenza i-acid reflux ibe ngcono
Ama-Herbal teas angasiza ekunciphiseni isisu esibuhlungu. I-lemon, i-ginger, ne-peppermint herbal teas yizinketho ezinhle ngoba lawa makhambi alungele isicanucanu. Lesi siphuzo esishisayo sizosiza ukuxazulula isisu esithukuthele.
Ingabe isicanucanu noma enye into? Ukubonana nodokotela nini
I-nausea ingahle ibe nesizathu esiyingozi kepha futhi ingaba yisibonakaliso sento eyingozi, kusho uDkt. Uma isicanucanu siqhubeka, siphindeka, siba sibi, noma sihambisana nezinye izimpawu, umuntu kufanele acabangele ukufuna usizo lwezempilo.
Uma unezimpawu ezilandelayo ngaphezu kwesicanucanu, funa iseluleko sezokwelapha ngokushesha:
Ukuphela kwamanzi emzimbeni
Ukuqunjelwa okukhulu esiswini
Ukubona okufiphele noma izinguquko ezibukwayo
Ukuhlanganiswa kwalezi zimpawu nesicanucanu kungaba inkomba yesimo esibi kakhulu kufaka phakathi ukwehluleka kwezinso, i-meningitis, isifo senhliziyo, ingcindezi yangaphakathi ngenxa yokushayisana noma ukulimala kwengqondo okulimazayo, ukuphazamiseka kwe-vestibular, noma ubuthi be-carbon monoxide kanye nokunye ukuvezwa kobuthi.
Khumbula ukuthi isicanucanu naso siyi- uphawu lwe-COVID-19 . Uma ungaqiniseki ukuthi yini ebangela isicanucanu sakho futhi uma kukhona kulezi zimpawu ezilandelayo ezihambisana naso, kungcono ukukhuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo ukuze unqande i-coronavirus:
Ukukhathazeka noma ukukhathala
Ukulahlekelwa ukunambitheka noma ukuhogela
Siyini isixwayiso sebhokisi elimnyama?
I-Effexor vs. Zoloft: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
likusiza kanjani i-apula cider uviniga
okuyi-vitamin d2 engcono noma i-d3 engcono
uhlobo lwesifo sikashukela ishadi 2 likashukela egazini
bangaki abantu abathintekayo ukucindezeleka
kufanele ngithathe i-allegra ekuseni noma ebusuku